Mid ka mid ah madaxda Microsoft ayaa adeegsada iPhone | Wararka IPhone
In muddo ah hadda, waxay ku noqdeen kuwo moodada shirkadaha waaweyn ee teknolojiyadda adeegso jaantuska saamaynta, Shaqsi caan ah oo saameyn ku yeelan kara rayiga dad badan, gaar ahaan kuwa raacsan, sidaa darteed magaca saameyn sameeyaha iyo in kiisaska badankood, dadkani yihiin fannaaniin ama jilaayaal laga yaqaan adduunka oo dhan.
Kiiskani ma aha kii ugu horreeyay mana noqon doono kii ugu dambeeyay ee qof ay kiraysato shirkad weyn oo tiknoolajiyad ah si ay u xayeysiiso aaladooda laakiin yaa sameeya warqadda adeegsashada iPhone-ka, si kadis ah, in loogu baahiyo shabakadaha bulshada faa iidooyinka ku saabsan terminaalka kor u qaadaya.
Tusaalaha waxa aan hada idhi waxa laga helaa fanaanada Alicia Keys markii ay kiraysatay BlackBerry si ay isugu daydo in ay madaxa kor u qaaddo markay bilawday qalabkeedii ugu horreeyay ee taabashada, BlackBerry Q10. Laakiin dhab ahaan ma garanayo midka ka xun: waxa ku dhacay Alicia Keys ama madaxweyne ku xigeenka Microsoft ee nidaamyada hawlgalka, Joe Belfiore, iyagoo adeegsanaya iPhone halkii ay ka isticmaali lahaayeen terminaalka Windows 10 Mobile, sida Lumia 950 ama 950 XL, Redmond- Nidaamka ugu dambeeyay ee shirkadda ku shaqeeya.
Hagaag runtii, Madaxweyne kuxigeenka Microsoft Joe Belfiore isticmaalay Iphone si uu ugu soo qoro Twitter sawirka safarkiisii ​​ugu dambeeyay ee Japan… Inta lagu jiro fasaxyadaada. Sida muuqata Microsoft waxay u baahan tahay in shaqada dhamaan shaqaalaha taleefanka shirkadu isticmaalaan aalad iyaga soo saartay, laakiin waqtigooda firaaqada ama fasaxa waxay isticmaali karaan qalab kale, wax aan ku dhicin Steve Ballmer oo ku sigtay inuu shaqaalaha Microsoft qariyo taleefannadooda, gaar ahaan haddii ay ahaayeen iPhone, qosolkii ka dib markii la sii daayay markii Steve Jobs soo saaray ka dib.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Mid ka mid ah madaxda Microsoft ayaa adeegsada iPhone
Ha ila yaabin, w10m waa mid aad u cagaaran ama xitaa moodooyinka la soo baxay markii hore, "kuwa diyaarka ah" si fiican ayey u shaqeeyaan, waxay siinayaan khibrad adeegsade jahwareer leh. Maareeyayaashu way yaqaanaan waxayna isticmaalaan waxa ugu fiican ee xilligan la joogo.
Waxay dhigayaan baytariyada sanadkan MS ama waa inay ka tagaan gabi ahaanba mobilada. Barnaamijyadoodu waa kuwo aad u fiican oo ay naftooda u huraan inay u qabtaan barnaamijyada kale ee gaarka ah.
Niyad jabinta khibrada isticmaalaha? Ma lihid fikrad xun.
Telefoon Windows looguma talo galin geeks, waxaa loogu talo galay dadka caadiga ah ee ubaahan waxyaabo caadi ah oo aan ubaahnayn geeks aan micno lahayn iyo dadka isticmaala windows windowska ayaa diirka laga siinayaa